Malunga nathi -Wuxi Lead Precision Machinery Co., Ltd.
Wuxi Lead Precision Machinery Co., Ltd. Ngaba Cnc Machine Shop Ukunceda Precision Cnc ngomshini Iintetho, Metal Ukunyathela Ke Sheet Metal Ukubumba Kwiindidi ezahlukeneyo Industries.
Sineminyaka engaphezu kwama-15 yamava asemgangathweni wokuvelisa kunye neeprototypes zabavelisi bezixhobo zokuqala (ii-OEMs) kwihlabathi liphela.
Siyinkampani yabucala eyasekwa ngo-2000.
Ekuqaleni, kukho kuphela umatshini we-CNC we-2 kwiworkshop yethu kwaye abathengi bethu abazizo iinkampani ezinkulu. Nangona kunjalo, ngamava ethu atyebileyo kunye nomgangatho ogqwesileyo, inkampani yethu yayikhula ngokukhawuleza kunye nabathengi bethu kunye.
Oomatshini bethu be-CNC bonyuke baya kwiiseti ezili-10. Kwaye abasebenzi bethu bonyukile ukusuka kwi-2 ukuya kwi-12.
Sifudukele kwisityalo sethu esitsha. Kwaye siqala ukuba yinkampani yaseMelika yomthengisi we-OEM.
Esinako ngaphezu kwama-20 oomatshini CNC. Kwaye senza titanium kunye nefayibha yeglasi prototypes kwinkampani yezomkhosi.
Ngenxa yobulunga obuphezulu kunye nokuhanjiswa kwangexesha, sacetyiswa ngumthengi wethu waseIreland ukuba abe ngumthengisi weWheel Hub yoMdyarho woMdyarho weMidlalo yeOlimpiki yaseLondon ngo-2012
Sibe yinkampani yezomkhosi yaseMelika echaziweyo titanium kunye neGlassfiber CNC ngomatshini weenxalenye zomthengisi. Ngeli xesha, saqala ukusebenzisana nenkampani yaseMelika edume kakhulu ngokuCwangcisa.
Sakha saza safudukela kwisityalo esitsha. Kulo nyaka, abasebenzi bethu baba ngaphezulu kwama-50, kwaye bamisa iofisi yethu e-CA, e-USA.
Lindela inkqubo ye-CNC Machining, ishishini lethu landisiwe ukuya kwi-Metal stamping kunye ne-Sheet yenkqubo yesinyithi.
NGOKU, sisasanda ngoku, injongo yethu YOKWENZA ITHENGA LETHU LWE-CNC LIBE LAKHO.
Senza iindawo zesiko kunye neengcinga ezintlanu eziphambili.
Kule minyaka idlulileyo, siphuhlise igama lokuba yinkampani ephatha imisebenzi enzima kungekho mntu ufuna ukuyenza. Ukuzimisela kwethu okuqhubekayo kokuvelisa iinxalenye kunye nezinto ezinesiphene zero kuye kwajika iqela lethu laba sisombululi seengxaki. Eso sesona sizathu siphambili sokuba senze igalelo kwimidlalo yeOlimpiki.
Sinexabiso elikhuphisanayo kwaye asilalanisi kumgangatho. Sinikezela ngesiqinisekiso kuwo onke amabakala okuthobela kunye nokuhlangabezana nemigaqo. Icandelo elenziwe kakuhle kwaye lenziwe ngomatshini kwizixhobo ezilungileyo ezidlulileyo ngaphandle kweemveliso ezenziwe ngexabiso eliphantsi kwaye zibiza kakhulu ekuhambeni kwexesha. Ngoqeqesho lokungeniswa kunye noqeqesho oluQhelekileyo, abasebenzi bethu banemvakalelo esemgangathweni yomgangatho.
Ufumana iodolo yakho ngexesha, ngokupheleleyo kunye nokucaciswa.
I-CNC yokugaya, ukujika kwe-CNC, ukunyathela kwesinyithi, inkqubo yentsimbi yentsimbi ukuhlangabezana neeodolo zakho.
Abaphathi beNkonzo abaThengi aba-4 bakukhonza kwiiyure ezingama-24 kwiintsuku ezisi-7. Sizabalazela ukuba kufumaneke kwaye sinxibelelane 'njengevenkile yomatshini wengingqi'. Sifumaneka xa usifuna. Nxibelelana nathi ngengxoxo ekwi-Intanethi, ukufowunelwa ngefowuni okanye nge-imeyile.